कालो अंगुर खानुका यि फाइदा, जुन फाइदा थाहा पाएपछि तपाईं पनि खाेजि-खाेजि खान थाल्नुहुनेछ – Annapurna Daily
कालो अंगुर खानुका यि फाइदा, जुन फाइदा थाहा पाएपछि तपाईं पनि खाेजि-खाेजि खान थाल्नुहुनेछ
On Jun 4, 2021 2,033
एजेन्सी । फलफूल खाँदा स्वास्थ्यलाई फाइदा पुर्याउँछ । जसमध्ये अंगुर खाँदा पनि स्वास्थ्यलाई विभिन्न फाइदा पुर्याउँने चिकित्सकहरु बताउँछन् । कालो अंगुर खाँने गर्दा स्वास्थ्यलाई निकै फाइदा पुग्छ जुन फाइदा यश प्रकार रहेका छन्:-
१. कालो अंगुरको सेवनले रगतमा कोलेस्ट्रोल को निमार्ण गर्न रोक्छ र मोटोपना बाहेक अन्य स्वास्थ समस्याहरुबाट पनि बचाँउछ ।
२. यसले शरिरमा बढि भएको युरिक एसिडको स्तर कम गर्छ जसले किड्नीमा भार बढ्दैन र किड्नी स्वस्थ हुन्छ ।
३. क्यान्सरबाट बच्नको लागि कालो अंगुर फाइदाजनक छ । खासगरि छालाको क्यान्सरबाट बच्नको लागि यसको सेवन धेरै नै प्रभावकारी हुन्छ ।
४. अल्जाइमरको बिरामीहरुको लागि कालो अंगुर फाइदाजनक हुन्छ । यसमा रहेको रेसवेराट्रोल नामक तत्व अल्जाइमरबाट लड्नको लागि धेरै नै प्रभावकारी हुन्छ ।
५.यसमा पाइने एन्टिअक्सिडेन्टले हार्ट अट्याक र हाई कोलेस्ट्रोल जस्ता समस्याहरुबाट लड्नमा मद्दत गर्छ ।
यस्ता राेगसँग लड्ने क्षमता प्रदान गर्छ कालो अंगुर सेवन गर्नाले: कालो अंगुर एउटा यस्तो फल हो जसलाई केटा केटी देखि बृद्ध समेतले खान मन पराउछन् । यो खादा गुलियो हुन्छ तर यसमा चिनीको मात्र कम हुन्छ । अंगुर सेवन गर्नाले विभिन्न रोगबाट छुट्कारा पाइन्छ । जस्तैः
क्यान्सर: अंगुरमा भएको पोलीफेनोलिक फाइटोकेमिकलले शरीरलाई क्यान्सरबाट मात्र नभई कोरोनरी मुटुरोग, नसारोग, बिर्सने रोग र फंगल संक्रमणबाट लड्ने क्षमता प्रदान गर्छ ।
रक्तस्राव: शरीरको कुनै भागबाट धेरै रगत बग्यो भने अंगुरको जुस एक गिलास बनाएर दुई चम्चा मह मिसाएर पिउनुस् । रगतको क्षतिपूर्ति हुन्छ ।
फोकाफोकी: अनुहार वा जिउमा आएका फोकाफोकीलाई सुकाउनका लागि अंगुर सहायक हुन्छ । माइग्रेन: माइग्रेन भएपछि टाउकोको आधी भागमा पीडा हुन थाल्छ । अंगुर खाएमा माइग्रेनको पीडा हराउँछ ।
रक्ताल्पता: शरीरमा रगतको कमी हुन नदिनका लागि दिनदिनै खाली पेट अंगुर खानुहोस् । हृदयघात: हृदयघात जस्तो गम्भीर रोगमा पनि अंगुर लाभदायक हुन्छ । यसले शरीरमा रगत जम्न दिँदैन जसका कारण मुटु ठीक अवस्थामा रहन्छ । तपाईं पनि मुटुरोगी हुनुहुन्छ भने कालो अंगुरको रस पिउनुस् । एजेन्सीको सहयोगमा